I-Cute B Cup Big Ass Intombazane yaseJapan Akira TPE Sex Doll
Onodoli bezocansi baseJapan,Onodoli abasesifubeni flat,B indebe onodoli bezocansi,Onodoli bezocansi abancane,Onodoli bezocansi be-Anime
I-Akira - Dollhouse 168 Ikhanda Elingatholakali le-TPE Japanese Sex Doll EVO Version 150cm
Londoloza 19% $ 3,177.38 $ 2,580.62
U-Akira uzuze izinhliziyo zabantu abaningi ngenxa yokubonakala kwakhe emsulwa. Ngemuva kwakho konke, lokhu akumsulwa kangako. Unobuso obumangazayo. Uma uziphatha njengegwababa, umbuzo wakho kuphela ukuthi kungani ulinde isikhathi eside kangako ukuchitha ubusuku naye. Ubukeka emuhle futhi emsulwa, kepha unolwazi kakhulu.
U-Akira uyintombazane enhle enokubukeka okuvelele. Isimo sakhe simnene, sinomusa futhi sithule. Unenhliziyo efudumele nenomusa nohlangothi olunobuntwana, olunobuntwana. Ukhathazeke kakhulu ngemibono yodade nabezindaba nabanye, kepha kwesinye isikhathi kunzima kakhulu ukusho ukuthi ufunani ngempela. Okubi ukuthi kunokungazami ukwenza izinqumo.
Uthanda ukudla okuningi, futhi ukusitheka kwakhe okuyingxenye kungenzeka kungalahlekeli udadewabo. Owokuqala ngu "utamatisi", ikakhulukazi "utamatisi ongaphekiwe", imifino emisha nokunye okunjalo. Kepha ngithanda kakhulu ukudla ama-noodle ase-Italy asolwandle (lesi sidlo ngokuvamile sisebenzisa utamatisi noma utamatisi omningi), kodwa ngiyazonda utamatisi kodwa ngithanda ukufaka utamatisi.
Ungunodoli ongokoqobo onekhanda nomzimba ongasuseki. Ake uzizwe ukuthi ungumuntu ophilayo.
Isisindo: Ama-63 lbs (29kg)
I-Bust: Amasentimitha angama-28.8 (73cm)
Isinqe: Amasentimitha angama-20.9 (53cm)
Okhalweni: Amasentimitha angama-30 (76cm)
Ubulili: Amasentimitha angama-6.7 (17cm)
Indunu: Amasentimitha angama-5.1 (13cm)
Umlomo: Amasentimitha angama-3.9 (10cm)
Usayizi Wokupakisha: 59.9*15.8*11.1 inches(152*40*28cm)